काठमाडौं गएका श्रीमानको फोन उठाउँदा, उड्यो श्रीमतीको होस « Naya Bato
काठमाडौं गएका श्रीमानको फोन उठाउँदा, उड्यो श्रीमतीको होस
काठमाडौं। कामको सिलसिलामा काठमाडौं गएका एक व्यापारीको फोनबाट उनकी श्रीमतीलाई फोन आयो । तर, फोनमा उनका श्रीमान् होइन अर्कै मान्छे बोलिरहेका थिए । ती व्यक्तिले २० लाख रुपैयाँको माग गरेपछि श्रीमतीको होसहवास उड्यो ।
भारतको उज्जैनबाट ती व्यापारी व्यापारको सिलसिलामा काठमाडौं आएका थिए । तर यही क्रममा उनको अपहरण भएको थियो । डराएकी श्रीमतीले अपहरणकारीले मागेको रकम उसले बताएको बैंक खातामा जम्मा गरिदिइन र प्रहरीकहाँ गइन् । पैसा पाएपछि व्यापारी छुटे । छुटेपछि उनले आफूलाई ४ दिनसम्म बन्धक बनाएर राखिएको र निकै कुटपिट गरेको बताए । प्रहरीले षड्यन्त्र रच्ने ती व्यापारीका परिचित व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ ।
ती महिलाले बताएअनुसार ती व्यापारी पावेश सिंह २३ अगष्टका दिन कामको सिलसिलामा नेपाल जानुपर्ने भन्दै घरबाट हिँडेका थिए । इन्दौरबाट फ्लाइटमा मुम्बइ पुगेका ती व्यापारीले त्यहाँ पश्चिम बंगालका व्यापारी सुरजित सिंह मण्डलसँग भेटेका थिए । ती व्यापारी पनि पावेशको परिचित थिए । त्यसपछि उनी त्यहीँबाट नेपालका लागि उडेका थिए ।
उनी नेपाल पुगेपछि उनकी पत्नीलाई ५ फोन आए तर उनले ती फोन उठाउन सकिनन् । पछि मिसकल देखेपछि उनले ह्वाट्सएपमा सोभिन् ‘के भयो ?’ लगत्तै पत्नीलाई पतीकै नम्बरबाट भिडियो कल आयो । पावेशले श्रीमतीलाई भने ‘यहाँ केही व्यक्तिले मेरो अपहरण गरेका छन् । यिनीहरुले २० लाख रुपैयाँ मागेका छन् । जतिसक्यो छिटो व्यवस्था गर्नु । अन्यथा यिनीहरुले मलाई जे पनि गर्न सक्छन् ।’
त्यसपछि अर्का युवकले पावेशकी श्रीमती आरतीलाई दुई एकाउण्ट नम्बर दिए र जति पैसा छ तुरुन्त दिन भने । अपहरणकर्ताले यदि यो कुरा कसैलाई भनेमा नेपालमै पावेशविरुद्ध उजुरी गरेर १० देखि १५ वर्षसम्मको लागि जेलमा फसाउने धम्की दिए । आरतीले उनीहरुले आफ्ना श्रीमान्लाई मारिदिने डरले थोरै थोरै गरेर सबै रकम खातामा राखिदिइन् । अब पावेश छुट्छन् भन्ने लागेपछि उनी प्रहरीकहाँ गइन् ।
पावेशका अनुसार मुम्बइदेखि काठमाडौंसम्मको टिकट तिनै व्यक्तिहरुले मिलाएका थिए । उनीहरुले पावेशलाई नेपालमा ठूलो पार्टी भएको र त्यहाँ व्यापारको ठूलो डिल हुन सक्ने बताएका थिए । काठमाडौंमा पनि उनलाई लिन एयरपोर्टमै मान्छे पठाएका थिए । पावेशले उनीहरुको कुरा विश्वास गरेर सँगै हिँडे तर उनीहरुले पावेशलाई पुरानो घरमा राखेर पहिले १ करोड मागेका थिए । पछि पावेशले आफूसँग यति ठूलो रकम नभएको भनेपछि घट्दै घट्दै २० लाख मागेका थिए ।
खातामा पैसा आएपछि अपहरणकारहिरुले पावेशलाई छोडिदिए । त्यहाँबाट छुटेपछि उनी दिल्ली पुगे र आरतीलाई फोन गरे । सूचना पाएपछि उज्जैन प्रहरी आरतीसँगै दिल्ली पुग्यो र पावेशलाई लिएर उज्जैन गयो । पछि अनुसन्धानका क्रममा पश्चिम बंगालका तिनै व्यापारी सुरजित सिंह मण्डलले नै षड्यन्त्र रचेको खुलेपछि प्रहरीले उनलाई कलकत्ताबाट पक्राउ गरेको छ । नेपाली अपहरणकारीहरुलाई पक्राउ गर्न नेपाल आउने तयारी भइरहेको उज्जैन प्रहरीले जनाएको छ ।
म्यादी प्रहरीको पोशाकमा करोडौं घोटाला, यसरि खुल्यो रहस्य
चौधरी ग्रुपद्धारा उत्पादीत वाईवाई चाउचाउमा विषदि रसायन प्रयोग, २६ पीपीएम शिशा रहेको पुष्टी
मनाङेको खबरमा यसरी चुके मिडिया, सर्वोच्चले मनाङेबारे फैसला गरेकै हैन
नेपालमा पाईने यार्सागुम्बा किन सुन भन्दा नि महँगो छ ? के-केमा हुन्छ यस्को प्रयोग ?
काठमाण्डौकी खानदानी केटीको अनौठो फेसबुके धन्दा, थाहा पाएपछि प्रहरी नै दंग
नेपालसंग घनिष्ठ साईनो रहेका यी हुन बलिउडका ५ सेलिब्रेटीहरु